စျေးပေါသောအခြောက်ခံစက်နှစ်မျိုးလုံးမြေသြဇာဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ | YiZheng
Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator ဆိုတာဘာလဲ။
The ဘွန်းထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်သည်ခြောက်သွေ့မှုမရှိသည့် granulating machine နှင့်အဆင့်မြင့်ခြောက်သွေ့သော free granulation equipment ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ အသစ်နှင့်အသုံး ၀ င်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၏အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်စက်မှုလယ်ယာထုတ်လုပ်မှု၏အချို့သောစွမ်းရည်ကိုရရှိရန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းငယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator ၏အလုပ်နိယာမ
အဆိုပါ Roll Extrusion ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်သည် extrusion slip model တစ်ခုဖြစ်ပြီးအမှုန့်များအဖြစ်သို့အမှုန့်များအဖြစ်ချုံ့ရန်ခြောက်သွေ့သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အပူအလိပ်လိပ်ပုံနှိပ်စက်သည်အဓိကအားဖြင့်ပြင်ပဖိအားပုံစံပေါ် မူတည်၍ အရာ ၀ တ္ထုများထဲသို့ချုံ့ရန်အလှည့်ကျသော roller နှစ်ခုကြားရှိကွာဟမှုများကိုဖြတ်သန်းသွားသောပစ္စည်းများကိုအတင်းဖိအားပေးသည်။ လှိမ့်နေစဉ်အတွင်းရှိအမှုန်သိပ်သည်းဆအချို့သည်အမှုန်အင်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် ၁.၅ မှ ၃ ဆအထိတိုးနိုင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အစာ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သတ္တုနှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများစသည်ဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ (အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအပါအ ၀ င်) ဇီ ၀ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ သံလိုက်ဓာတ်မြေသြဇာစသည်) ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို Extrusion ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်ကိုရွေးချယ်ပါ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံပေးဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထား အော်ဂဲနစ် & ဒြပ်ပေါင်းများဓာတ်မြေသြဇာ granulation ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြုသူများကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန် ၁-၁၀၀,၀၀၀ တန်အထိခြောက်သွေ့သောစက်ကိရိယာများမရှိခြင်း၊ နည်းပညာလမ်းညွှန်ချက်အပြည့်စုံများထုတ်လုပ်ခြင်း၊
ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောဖွံ့ဖြိုးပြီးသောအခါအရည်အသွေးမြင့်မားသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဒဏ်ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်လှပသောအသွင်အပြင်၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအားသာချက်များရှိသည်။ သက်တမ်းကြာရှည်စွာခံနိုင်ခြင်း၊ မြင့်မားသောကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ပြည်တွင်းဓာတ်မြေသြဇာအတောင့်စက်များအဆင့်မြင့်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှထုတ်ကုန်များ၊
Extrusion Compound Fertilizer Granulator စက်၏အားသာချက်
၁။ မည်သည့်ဖြည့်စွက်ဆေးမှမပါဘဲခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များကိုတိုက်ရိုက် granules ပြုလုပ်သည်။
၂။ granular အင်အားကို roller ၏ဖိအား၊ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအားကိုညှိခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
၄။ ပစ္စည်းများသည်ဖိအားဖြင့်ဖိအားကိုဖိအားဖြင့်အင်အားဖြစ်ပြီး၊ ထပ်ပေါင်းထည့်စရာမလိုဘဲထုတ်ကုန်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုအာမခံပေးသည်။
6. Granular စွမ်းအားသည်အခြား granulating နည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမြင့်မားသည်, တိုးတက်မှုပျော့အမြောက်အများသိပ်သည်းဆအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်စုဆောင်းခြင်း၏အချိုးအစားကိုတိုးမြှင့်အခါသမယအတွက် significant သိသာဖြစ်ကြသည်။
အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများနှင့်အညီ ၇။ ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးကို granulating ပြုလုပ်နိုင်သည်။ granular strength အားလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိနိုင်သည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ တိုတောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊
၉။ ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အမှုန့်ထုပ်ပိုးမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပြီးထုတ်ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်း။
၁၀။ အဓိကထုတ်လွှင့်မှုအစိတ်အပိုင်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအလွိုင်းပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ခရိုမီယမ်နှင့်အခြားမျက်နှာပြင်အလွိုင်းများသည် wear ခံနိုင်ခြင်း၊ ချေးခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်ဖိအားပေးခြင်းတို့ကိုများစွာတိုးတက်စေပြီးဒီစက်သည်သက်တမ်းရှည်စေပါသည်။
YiZheng Heavy Machinery Co. , LTD သည်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်စနစ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ဒါ ခြောက်သွေ့သောနှစ်ကြိတ်စက်မရှိသောပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမရှိ အမျိုးမျိုးသောကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်မြင့်မားသော၊ အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ကျသောဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ နှစ်ဆ granulator ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် granules ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ခြောက်သွေ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်မလိုအပ်ပါ။ အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါသည်။ granulator ၏စာနယ်ဇင်း roller ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်အရွယ်အစားအောင်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ လိုင်းတွင်အလိုအလျောက်အသုတ်ပြုစက်၊ ခါးပတ်ခံစက်များ၊ ဒယ်အိုးရောနှောစက်များ၊ ပန်ကာထည့်သွင်းစက်၊ extrusion granulators၊ rotary screening machine, lested products ဂိုဒေါင်နှင့်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်မြေသြဇာစက်ကိရိယာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူသိများသောဖောက်သည်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။
ခြောက်သွေ့သောနှစ်ကြိတ်စက်မရှိသောပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမရှိ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု：
ကုန်ကြမ်းအသုတ် (Static batch machine) →ရောနှောခြင်း (Disc ရောနှောစက်) → Granulating (Extrusion granulator) →စိစစ်ခြင်း (Rotary drum screening machine) → Coating (rotary drum အပေါ်ယံလွှာစက်) →အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း (အလိုအလျောက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုး) →သိုလှောင်ခြင်း (သိုလှောင်ထဲမှာ အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့နေရာ)
သတိပြုရန် - ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်သင့်ရည်ညွှန်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
တူးထုတ်သည့်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator ဗီဒီယိုပြသမှု
Roll ကို Extrusion Compound ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
ရှေ့သို့ Self-propelled ဆွေး Turner စက်
နောက်တစ်ခု: နဂိုအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ Granulator